सिबकथर्न तेल जलाइएको छ: गुण र प्रकार्य
विविधता को कुनै पनि रासायनिक र थर्मल जलाहरु को न केवल विशेष एंटी जला दबाइहरु संग, बल्कि लोक तरीकों संग पनि उपचार गर्न सकिन्छ। यस्तो उपाय, जस्तै समुद्री बर्थनर तेल, जलाउने देखि धेरै प्रभावकारी ढंगले मद्दत गर्दछ। सयौं वर्षका लागि समान उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। सागर-बाल्टीहट तेलमा उच्च सुरक्षा, उत्कृष्ट चिकित्सकीय प्रभाव छ।
सञ्चालन र संरचनाको सिद्धान्त
पाकेको फलबाट समुद्रको भाँडाको तेल प्राप्त गरियो। समाप्त उत्पादन मा फैटी कार्बोक्साइलिक एसिड, फास्फोलिपिड, कार्टोन, भिटामिन ए र ई, टोकोफरोल हुन्छ। यी रसायनहरूसँग सूर्य क्षतिग्रस्त छालामा संयुक्त प्रभाव छ। समुद्री बोरथर्न तेलको साथ जलाउने उपचारले निम्न परिणामहरू प्राप्त गर्न सम्भव बनाउँछ:
पारजनिक सूक्ष्मजीवहरूको विनाशकारी छालामा विनाशकारी, जुन, जीवाणुरोधी कार्य हो।
तेल बनाउनुका घटकहरू इन्सुलेशन प्रक्रियाहरू हटाउँछन्, ऊतकहरूको सुँगुर घटाउन, र एन्जिज्जिसिक प्रभावको ग्यारेन्टी दिन्छ।
भिटामिन र माइक्रोटेटिटहरू चयापचय प्रक्रियाहरू छिटो र सेल पुनरुत्पादन (रिकभरी) उत्तेजित गर्दछ।
जल ब्रेकर्नको तेल जलाएर पूर्णरूपमा मद्दत गर्दछ र तपाईंलाई छोटो समयमा क्षतिग्रस्त ऊतक बहाल गर्न अनुमति दिन्छ।
अवस्थाहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यो उपचार मात्र थर्मल थर्मल जलाउने अवस्थामा प्रयोग गर्न सकिँदैन, तर जब एकाइले एसिड र एल्किसद्वारा छालालाई क्षति पुर्याउँछ। यसको अतिरिक्त, यो छाला मा जलन कम गर्न मद्दत गर्दछ, जुन एक सुनको साथ देखा पर्यो। यसले एलर्जी प्रतिक्रियाहरू उत्पन्न गर्दैन, त्यसैले बालबालिकाहरूले यसलाई समुद्री बर्थकोर्न तेलमा सिफारिस गर्छन् । प्रयोगको लागि निर्देशनहरू स्पष्ट सिफारिसहरू समावेश छन् जुन यस उपकरणको प्रयोगबाट अधिकतम सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न निरीक्षण गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छन्। प्राकृतिक समुद्र-बोरथर्न तेलले फोक्सोको उपचारको लागि उपयुक्त एसिड र एल्किससँग त्वचालाई सम्पर्क गरी उपयुक्त हुन्छ।
यो औषधि पत्ता लगाउने कहाँ
ज्वरोबाट ओब्ल्हाहोभो तेल किन्नुहोस् पारंपरिक फार्मेसीमा वा आफ्नै शक्ति द्वारा उत्पादन गर्न सकिन्छ। तपाईं लामो समयको लागि यो तेल तरल भण्डार गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसैले यसले तपाईंको गृह औषधि क्याबिनेटमा कसैलाई खडा गर्नेछैन। रचना तैयार गर्नुहोस् पकाई जामुनबाट बनाइन्छ, तिनीहरूका रस बाहिर निस्कन्छ। तेलको तह प्राप्त गर्दा, 24 घण्टाको परिणामस्वरूप मिश्रणलाई जोडिएको छ। यो सावधानी देखि सतह बाट हटाइएको छ र फ्रिजमा भण्डार गरिएको छ।
समुद्र-बोरथर्नबाट तेलको प्रयोगको लागि नियम
सिबकथर्न तेल जलाउनको लागि 1 सेकेण्ड र2डिग्री डिग्रीको क्षतिको लागी प्रयोग गर्न सकिन्छ। क्षतिग्रस्त इलाकाहरु यो औषधि संग उपचार गरिन्छ, मरीजको दुखाइ कम गर्ने, छातीमा रोगजनक जीवहरु को रोकथाम लाई रोक्न। सनबर्नको साथ समुद्र-बाक्लोथन तेल - राम्रो तरिकाले 2-3 दिनमा पफनेस र हाइपरिमिया हटाउने विकल्प। पहिले तेलको साथ बाँझ नैपकिन घटाउनुहोस्, त्यसपछि धीरज यसलाई यसलाई क्षतिग्रस्त छाला क्षेत्रमा राख्नुहोस्। भ्रामक प्रक्रियाहरू बाहिर निकाल्न, सम्भावित हाइड्रोजन पेरोक्साइडसँग जला साइट पूर्व-उपचार गर्न सम्भव छ।
सनबर्नको साथ समुद्री-ब्रेथर्नको तेल प्रयोग गर्नु अघि, यसलाई जल नहानेमा बाँध्न वांछनीय छ। यदि घाँटीमा घाँटी हो भने, यो हटाइन्छ, घाव को किनारों आयोडीन को श्वेत समाधान संग असंभव छ र तब उनि तेल बोरर्न को तेल को उपयोग शुरू गर्छन। नैपकिन एक चिकित्सकीय पट्टी वा टाँस्ने वाला प्लास्टर संग तय गरिएको छ। क्रम2को जलाशयको साथ समुद्री बाकर्नर तेलको लागि वा अन्य कुनै पनि प्रभावकारी थियो, यो 2-3 घण्टामा पछाडि परिवर्तन गर्न वांछनीय छ। 1 सेकेन्ड र2एन डिग्रीको जलाशयलाई निको पार्न, 10-12 दिनको औसत चाहिन्छ।
यदि जलाशय क्षेत्र अनुहारमा छ भने, तपाइँ तेलमा कपास स्वाब लाई स्नेहन गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसँग यसको चोटको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ। गहिरो सूर्यबर्न प्राय: छालाहरु को उपस्थिति संग हुन्छ, उनि केवल अस्पताल मा खुले जा सकते हो। घरमा यो पूर्णतया बाँझिएको अवस्था सिर्जना गर्न गाह्रो छ, त्यसैले जब आत्म-सफाई बुलबुले, छालामा संक्रमणको जोखिम उच्च छ।
ठूलो एसिसेना ने समुद्र को बर्थथर्न देखि तेल को अद्वितीय उपयोगी गुणहरु को उल्लेख गरे। प्राचीन चाइल्डर्सले छालामा कुनै जलाउने उपचारको प्रविधिको स्वामित्व पाएको, समुद्री बर्थर्नर तेल प्रयोग गरी। ती यौगिहरुको प्रयोगमा निर्देशनहरू संरक्षित छैनन्, तर आधुनिक चिकित्सकहरूसँग यस उपायको प्रयोगको लागि आफ्नै गोप्य छन्।
जल-बोरथर्न तेल हाल जलाउने, खुला घावहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यसमा अनौठो प्राकृतिक विशेषताहरू छन्, न्यूनतम अवधिमा मद्दत गर्दछ रोगीको स्वास्थ्य फिर्ता गर्न। समुद्री बाकर्न को फलहरु लाई भिटामिन सी संग संतृप्त गरिन्छ, जो शरीर मा तनाव संग निपटने मा मदद गर्दछ, यसमा चयापचय प्रक्रियाहरु लाई पुनर्स्थापित गर्दछ। Tannins, मल्टीवाइटामिन, Phytoncids, जो समुद्र-बोरथर्न मा धेरै अमीर हुन्छन्, हानिकारक सूक्ष्म जीवहरु लाई छाला को परतहरुमा नदिने अनुमति नदिनुहोस्। एलर्जीहरूले पनि उनीहरूको बिरामीहरूको लागि यो उपाय प्रयोग गर्न सिफारिस गर्छन्।
कस्मेटोलोजीमा प्रयोग गर्नुहोस्
यो विश्वव्यापी उत्पाद कस्मेटिक उद्देश्यका लागि उपयुक्त छ। शुद्ध सुकेको छालामा, तेललाई अवशोषित गर्न नसक्ने सम्म बनावट लागू गर्नुहोस्। प्रसाधन सामग्रीहरू विश्वस्त छन् कि यस्तो प्राकृतिक घटक, जब प्रणालीगत रूपले लागू हुन्छ, केवल छोटो समयमा अन्तरालमा जलाउने निशानहरू समाप्त गर्न मद्दत पुर्याउँदछ, तर रगतको स्पटहरू पनि मेटाउँछ। समुद्रको किनाराबाट तेलको आवेदनको प्रभावकारिता बढाउन, यो 2-3 घण्टा पछि प्रक्रिया दोहोरिने वांछनीय छ। नबिर्सनुहोस् कि तपाईं छालामा पस्टुलर छालाहरू छन् घटनामा समुद्री-बाल्टीहर्न तेल प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।
घर लोक उपचार मा रगत सफाई: लसुन र कागति, जडीबुटी, रस
Plantain कसरी भेला गर्ने? बोट प्रयोग गर्न उपयोगी गुण र contraindications
औषधीमा "जेलीफिश हेड" के हो?
Tincture cornel: दबाइ निर्धारण
को Altai Krai को अद्वितीय उपहार
र्याडोन स्नान: सङ्केत गर्छ र contraindications, शरीरमा प्रभाव को संयन्त्र
खरानीको मासु संग मिठो। हामी लोक उपचारको साथ व्यवहार गरौं
आफ्नो कम्प्युटरको लागि स्तम्भहरू छनौट
डायपर देखि एक बच्चा कसरी wean गर्न
फर्नीचरको लागि होम सिनेमा, आधुनिक टिभी टिभीको लागि स्ट्यान्डिस, टिभि स्ट्यान्ड। वर्गीकरण र विकल्प।
सुशील र सहज जूता हरेक दिन - rhinestones संग UGG जूता
कामचट्का नदी कहाँ छ? कामचट्का नदी: वर्णन, स्रोत, मुख, प्रकृति, वनस्पति र जीव
थिएटर पर्दा। उपकरण र थिएटर दृश्य को डिजाइन
फाइबर सिमेन्ट बसाई सराई। बाहिरी सजावट
अक्सर एक टाउको दुखाइ: कारणहरू, पीडा, प्रकृति के डाक्टर सम्बोधन गर्न
स्ट्रबेरी रूख (kudraniya): खेती र मर्मतका
Alexey Papin: defector किकबक्सिङ